''Puntland ma canshuurto gargaarka''
5 Jan 5, 2013 - 2:34:16 AM
Wasiirka Maaliyada Puntland Mudane Faarax Cali Jaamac ayaa sheegey inaysan dowladu canshuuro saarin gargaarka bini’aadanimo oo beesha caalamka ka yimaada.
Faarax Cali oo waramay Garowe Online ayaa yiri ‘’Warbixinada warbaahinta qaarkood lagu soo daabacey ee canshuuraha adeegyada bini’aadanimo waa dacaayad aan sal iyo raad lahayn’’.
Wasiirka oo hadalkiisa sii watay ayaa raacshey ‘’Ma jirto canshuur aan saarno gargaarka bini’aadanimo Puntland ,xiriirka ka dhaxeya Dowladda iyo wakaaldahana waa mid aan waxba iska bedelin oo wanaagsan’’.
Todobaadkii hore warbaahinta Horseed Media ayaa qortey in Xukuumadda Puntland hor istaagto Adeegyada bini’aadanimo ee deeqbixiyaasha ka yimaada.
‘’Xukuumadda Puntland waxay diyaar u tahay inay ka jawaabto su’aal kasta oo ku saabsan xaqiiqda gargaarka bini’aadanimo Puntland’’ ayuu hadalkiisa ku soo khatimey wasiirku.
Horumarka ka jira iyo geedi socodka Dimoqraadiyada Puntland ayaa waxa waayadan danbe caado u noqotey Warbaahinta qaarkeed inay iska indho-tiraan islamarkaasina ay abuuraan warar iyo shirar aan jirin taasoo sida la sheegey hoos ugu dhigtey misdaaqiyadoodi.